[Tuesday, February 19th, 13] :: Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho kula kulmay Xubin ka tirsan Senetka Maraykanka
Muqdisho (RH) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta oo Talaado ah magaalada Muqdisho kula kulmay Keith Ellison oo ah xubin ka tirsan golaha Senat-ka dalka Maraykanka.
Kulanka oo ka dhacay garoonka diyaaradaha Addan Cadde waxaa uu qaatay muddo 45-daqiiqo ah, waxaana uu ahaa mid ay saxaafadda dib joog ka ahayd.
Markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda si wadajir ah ula hadlay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Keith Ellison.
Ugu horreyn madaxweynaha ayaa sheegay in uu uga mahadcelinaayo Mr. Keith booqashada uu ku yimid magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo madaxweynaha uu intaas ku daray in mudanahan uu kaalin ka qaatay booqashadii uu ku tagay magaalada Minneapolis ee gobalka Minnesota oo meesha laga soo doorto Keith Ellison.
Wuxuu kaloo madaxweynaha sheegay in uu ka sheeyay siddii uu u dhici lahaa kulankii madaxweynaha iyo dhiggiisa dalkaas Brack Obama.
“Dowladda Maraykanka waxaan uga mahadcelinayaa taagerada ay dowladda Soomaaliya siisay. Xildhibaanku wuxuu ka mid ahaa xubnihii sida weyn iigu soo dhaweeyay gobolka Minnesota oo ay deggen yihiin Soomaalida dalka Mareykanka deggen kuwood ugu badan marka laga rebo qaaradda Afrika,” ayuu yiri madaxweyne Xasan oo warbaahinta la hadlay.
Madaxweynhahaa ayaa tilmaamay in Keith Ellison uu kala hadlay siddii loo sii xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada waddanka iyo in laga caawiyo dhibaatada Soomaalida ku heesata dalka Maraykanka gaar ahaan gobalka Minnesota.
Dhinaca kale, mudanaha laga soo doorto degmada Shannaad ee gobalka Minnesota Keith Ellison oo si wayn loo soo dhaweeyay ayaa isna sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay booqasha uu maanta ku yimid magaalada Muqdisho.
Wuxuu kaloo sheegay in magaalada ay ka jirto nabad iyo ammaan taasoo keentay in dad badan ay dalka dib ugu soo laabtaan.
Waxaa kaloo Keith Ellison uu caddeeyay in wax ka qaban doono dhibaatada xagga dhaqaalaha ee heesta Soomaalida ku nool gobalka laga soo duurto taasoo ka dhalatay markii xayiraad la saaray xawaaladaha Soomaalida oo lacago u soo diri jiray dalka.
Arrintaas ayaa timid kaddib markii ay soo baxeen casbi la xiriirta in lacagahaas ay gacanta u galaan kooxaha ka dagaalamka Soomaaliya ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
Keith Ellison waa mudanaha keliya ee muslimka ah ee ku jira golaha senate-ka Mareykanka, waxaana uu sheegay tan sannadkii 2006-dii in uu soo booqon doono Muqdisho.
Si kastaba, waa sarkaalkii ugu sareeyay oo ka socda xukuumada Wanshinto oo yimaada Muqdisho tan iyo markii Maraykanka uu aqoonsi siiyay dowladda Soomaaliya 17-kii bishii Janaayo.